Madaxweyne Gaas oo Gaalkacyo ku Dhagax dhigay Madaxtooyo cusub – Radio Daljir
Agoosto 30, 2015 7:05 b 0
Axad, Ogoosto 30, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 30-8-2015 magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug ka dhagax dhigay Xarunta Madaxtooyada Puntland , Wasaaradda Ganacsiga , Wasaaradda Howlaha guud iyo gaadiidka, Wasaaradda Beeraha , Bankiga dhexe ee Dawladda iyo taliskii hore ee booliska oo dib u habeyn lagu sameynayo.
Dhagax dhiga xarumahaasi waxaa sidookale goob joog ka ahaa Wasiiro, Xildhibaano, Maamulka degmada Gaalkacyo, maamulka Gobalka Mudug, xubno katirsan golaha deegaanka , waxgarad iyo masuuliyiin kale .
Ugu horeyn madaxweynaha ayaa dhagax dhigay xarunta Madaxtooyada Puntland ee Gaalkacyo oo la dhisayo, maadama dhawaan ay dawladdu xaruntaasi iyo xarumo kale oo dawladeed ay ka saartay dadweynihii ay gacanta ugu jireen.
Madaxweynaha ayaa sidookale dhagax dhigay Wasaaradda Ganacsiga , Wasaaradda Howlaha guud iyo gaadiidka, Wasaaradda Beeraha , Bankiga dhexe ee Dawladda iyo saldhigii hore ee booliska oo dib u habeyn lagu sameynayo.
‘’Aaad bay sharaf iigu tahay inaan dhagax dhigo xarumahaasi dawliga ah , weyna ku mahadsanyihiin gudigu shaqada wanaagssan ee ay qabteen ee ah baneynta guryaha dawladda ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa si gaar ah ugu mahadceliyey shacabkii sida wanaagsan u wareejiyey guryihii Dawladda ee ay kujireen , waxaana uu sheegay dhammaan xarumahaasi la baneeyey in loogu adeegayo shacabka Puntland.
Magaalada Gaalkacyo waxaa si habsami leh uga soconaya baneynta guryaha dawladda , qaabeynta iyo hagaajinta wadooyinka magaalada iyo sugida amaanka guud ee Gobalka Mudug ee Puntland.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Axad_30